Iqulunqwe Cup Enalitini mqengqeleki Ukunikela - China Viproce Industrial
Intshayelelo: Iqulunqwe indebe inaliti mqengqeleki iibheringi Ubume be DC yenaliti mqengqeleki obuvelisa (DC type) yenziwa strip ngentsimbi liqengqiwe, kubanda ngokuchanileyo ukusekwa. Ubume be-DC iibheringi inaliti mqengqeleki features ugcino isithuba kunye nesikhundla ephakamileyo. Ukuba ifanele izicelo enesithuba oluncinane kunye zezindlu nzima ngokwaneleyo ukuba abe raceway. Akukho mfuneko kwi indawo yezihlunu xa DC inaliti mqengqeleki obuvelisa licinezelwe kulo izindlu. Xa izicelo ezininzi isangqa ngaphakathi akuyomfuneko DC inaliti roller ...
iibheringi Iqulunqwe roller indebe inaliti
Ubume be-DC yenaliti mqengqeleki obuvelisa (DC type) yenziwa strip ngentsimbi liqengqiwe, kubanda ngokuchanileyo ukusekwa. Ubume be-DC iibheringi inaliti mqengqeleki features ugcino isithuba kunye nesikhundla ephakamileyo. Ukuba ifanele izicelo enesithuba oluncinane kunye zezindlu nzima ngokwaneleyo ukuba abe raceway. Akukho mfuneko kwi indawo yezihlunu xa DC inaliti mqengqeleki obuvelisa licinezelwe kulo izindlu.
Xa izicelo ezininzi isangqa ngaphakathi akuyomfuneko DC iibheringi inaliti mqengqeleki ngaphandle kokuba isikhondo raceway kukuthi, amakhonkco angaphakathi umgangatho akunakwenzeka ukuba DC linokuyithelekisa iibheringi inaliti mqengqeleki Vula and DC, Vala isiphelo DC inaliti mqengqeleki iibheringi izinto ezilungileyo uphawu kwi isiphelo sisondele lokubizwa . Zokusebenza uluhlu lobushushu ukuba iibheringi ngegrisi lubricated ezi -20 ℃ ukuya + 120 ℃.
Izakhiwo of series ezahlukeneyo izileyi indebe inaliti ingqalelo:
Intshi series: SCE BCE Sch BCH SN CSN B BH M MH
Okulandelayo: Inaliti roller Ukunikela
Iqulunqwe Cup Enalitini iibheringi
natywinwa Iqulunqwe Cup yenaliti Ukunikela